Home / समाचार / अवोध दुई बाल बालिका जेल मा किन? कारण यस्तो रहेछ पुरा समाचार पढ्नुहोला ।
अवोध दुई बाल बालिका जेल मा किन? कारण यस्तो रहेछ पुरा समाचार पढ्नुहोला । 0
भेरीगंगा नगरपालिका घर भएका २ वर्षीया नितु विक र सुषमा पाण्डेले बाहिरी संसारलाई नियाल्न पाएका छैनन् । उनीहरूको तोते बोली, चञ्चले स्वभाव र बालापनका सबै जिज्ञासा जेलको पर्खालभित्रै खुम्चिएका छन् ।आमाबाबुले गरेको गल्तीका कारण यी दुई नाबालिका सुर्खेत कारागारभित्र थुनिएका छन् । बाहिरी संसारसँग घुलमिल भई विद्यालयको आँगन टेक्ने बेला यी बालिका भने जेलभित्र बस्न बाध्य छन् ।बाहिरी संसारमा जन्मिए पनि उनीहरू जेलभित्रै हुर्किंदै गएका छन् । पाँच महिनाकी हुँदा जेल पुगेकी नितुले बाहिरी संसार देख्न नपाएको ११ महिना भयो । आमाको काखमै कारागार पुगेकी सुषमा बाहिर निस्कन नपाएको दुई वर्ष बित्यो ।
अपराध गरेर अभिभावक थुनिएपछि घरमा रेखदेख गर्ने कोही नहुँदा दुवै नाबालिका जेलभित्रै बस्न बाध्य भएका हुन् । अपराधबिना नै जेलमा बस्नुपरेका उनीहरू पटक–पटक गेटसम्म आउँछन् । उनीहरूको आवाज न कसैले सुन्छन् न त कसैले बुझिदिन्छन् । बाहिर आउन नसकेपछि उनीहरू पुनः भित्रै फर्कने गरेका छन् ।भेरीगंगाको मैनतडाका प्रमिसा विक र खिमबहादुर विकले गरेको गल्तीका कारण नितु जेलमा बस्नुपरेको हो । बहुविवाह मुद्दामा जिल्ला अदालतले कैद सजाय तोकेपछि खिमबहादुर र प्रमिसा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । बाबुआमाले कैद सजाय काट्ने अवधि बाँकी नै रहेकाले नितुले बाहिरी संसार नियाल्न अझै निकै समय पर्खिनुपर्नेछ । यसले उनको पढ्ने अधिकार कुण्ठित भएको छ । अभिभावकको गल्तीका कारण उनको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
भेरीगंगाकै चन्द्रकला पाण्डेको गल्तीका कारण सुषमा पनि जेल बस्न बाध्य छिन् । चन्द्रकला दुई वर्षअघि छिमेकीको घरमा आगो लगाएको अभियोगमा जेल चलान भएकी थिइन् । बाहिर संरक्षण गरिदिने कोही नभएपछि सुषमा आमासँगै कारागार पुगेकी हुन् । उनलाई पनि अक्षर चिनाउने बेला भइसकेको छ । तर, उनी कारागारभित्र अग्ला पर्खाल हेरेर बस्न बाध्य छिन् । बालिकालाई संरक्षण गरिदिने अभिभावक नहुँदा समस्या भएको कारागारले जनाएको छ।कारागार सुरक्षामा रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक रेशमलाल चौधरीले भने, ‘बाहिर पठाउँदा संरक्षण गरिदिने कोही छैन, तत्कालका लागि आमासँगै राख्नुपर्ने बाध्यता भयो ।
कुनै संघसंस्थाले उद्धार गरिदिए हुन्थ्यो, बालिकाले शिक्षा त पाउने थिए ।’उनका अनुसार जिल्ला कारागार १५ जना क्षमताको रहे पनि हाल एक सय ७५ पुरुष, १६ महिला र दुई बालिका गरी एक सय ९४ जना छन् । महिलाका लागि दुई र पुरुषका लागि सात कोठा भए पनि एउटामै १२ भन्दा धेरै कैदी सुत्न बाध्य छन् । कोठामा नअटाएपछि पुरुष कैदीहरू त्रिपाल टाँगेर सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाइएको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदी भएपछि कारागारमा व्यवस्थापनामा पनि समस्या भएको छ ।